July 19, 2009 by dalabyo Leave a Comment
Version cusub ku darayaa taageero tijaabo u sprites CSS. Tani waxa ay yaraynaysaa jeer load page (marka lagu dabaqi) iyo hagaajinaysaa ee Google ayaa xawaaraha bogga iyo Yslow scores Yahoo ayaa. Waxaa sidoo kale jira tiro code dib-dhamaadka kaas oo u ogolaanaya sprites in la abuuray oo ku haboon baahida ka mid ah (haddii aad leedahay lix calanka iyo ma aha oo kaliya 40, sababta isticmaali 12k image a?). Tani ma laga heli karo – laakiin waxaan ku siin karaan faylasha sax ah in qof iyaga oo u baahan, kaliya nala soo xiriir ama faallo ah oo ku saabsan this post. Waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan si gaar ah uga mahad Marek Fiser oo uu caawinaad la CSS oo noo ogolaaday in laga takhaluso blank.gif ee hadda tareynin, ma ahan oo keliya in files CSS laakiin sidoo kale in interface turjumidda.
A yar cayayaanka ayaa go'an in version this, laga bilaabo isticmaalaya livewriter in dhibaatada la soo laabtay luqada asal ah in widget, log isbedelka waa saaxiibkaa halkan.
Codsi kale – fadlan isticmaal noo trac (trac.transposh.org) inay u fayl-cayayaanka, Tani waxay na caawin (oo aad) hesho jawaabaha iyo socod oo fiican oo ku saabsan horumarka cayayaanka, oo kale oo noo ogolaadaa in ay ka fogaadaan shaqada nuqul.
Waxaan rajaynaynaa inaad ku raaxaysato doonaa daayo this.
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: sprites CSS, sprites calanka, yaryar, sii daayo, plugin wordpress